Soosaarayaasha dhalada ugu fiican ee dhalada & dabaqa dabaqa ee iibka | Propont
Guri > Wax soo wadaban
Shirkadeena (EPONT Jack) Shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka, ISO 9001: Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada iyo ISO / TS 16949, Dhaqanka Maareynta Adeegga, Saxeedka Maareynta Adeegga, Saxeexayada Hydraulic Jack, dabaqa jaakadaha sidoo kale dhaaftay CE, Gs&Shahaadada Tuv, waxaan leenahay kooxo horumarineed oo xirfadeed oo ku saabsan shuruudaha macaamiisheenna si aan u dalbano naqshadeynta, ee shirkadda, mashiinka shiidan, mashiinka shiidaalka, mashiinka tijaabada xamuulka, mashiinka tijaabada. Esbord Encerderwell, robot-ka Rockwell Robot, rinding Robot, oo ku garaacaya howsha iyo qalabka tijaabada, si ay u hayaan sanduuqa Shirkadda (sagxada @draulic dhalo) tayada shirkadda - jahwareerka qaybo ka mid ah shirkadda. Mashiinka si loo hubiyo in si sax ah u xushmeysa booska booska, xadka xadka, si tayada waxsoosaarka ah ay u ahayd soo bood tayo leh.
Dhalada caadiga ah ee ku habboon ee jactulic
Dabaqadaha dhalada ee caadiga ah ee Jack.
Soo-saareyaasha Qeexitaanka Qeexida
Yipengjack waxaa loo tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee alaab-qeybiyeyaasha PortA Port Jack, waxaan soo saarnaa tiro balaaran oo balaadhan oo ah badeecad tayo sare leh oo Port ah oo leh wax ku ool ah hufnaanta ugu weyn iyo sax ahaanta gaarka ah. Alaabteenayadu waxay u hoggaansamaan shuruudaha kala duwan ee warshadaha laga soo bilaabo tobanaan sano, waxaan sare u qaadnay qalabkeena wax soosaarka iyo awooda maareeyayaasha, injineerada iyo sidoo kale farsamoyaqaannada. Tayada iyo astaamaha ugu dambeeya ee Power Compay-ka PortA Power Part waa wax lagu badbaadi karo oo waxaa u mahadnaqaya macaamiisheenna ku yaalliin dhammaan xaaladaha suuqyada kala duwan. Alaabooyinka noocan oo kale ah ayaa ugu habboon macaamiisha sababta oo ah Jack Power Power Portra Power ee ay noo bixisay waxaa lasiiyaa si ay u qancaan baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
Takhasuska takhasuska leh ee ku takhasusay dhalada dhalada
Yipengjack waxaa loo tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee alaab-qeybiyeyaasha PortA Port Jack, waxaan soo saarnaa tiro balaaran oo balaadhan oo ah badeecad tayo sare leh oo Port ah oo leh wax ku ool ah hufnaanta ugu weyn iyo sax ahaanta gaarka ah. Alaabteenayadu waxay u hoggaansamaan shuruudaha kala duwan ee warshadaha laga soo bilaabo tobanaan sano, waxaan sare u qaadnay qalabkeena wax soosaarka iyo awooda maareeyayaasha, injineerada iyo sidoo kale farsamoyaqaannada. Tayada iyo astaamaha ugu dambeeya ee Power Compay-ka PortA Power Part waa wax lagu badbaadi karo oo waxaa u mahadnaqaya macaamiisheenna ku yaalliin dhammaan xaaladaha suuqyada kala duwan. Alaabooyinka noocan oo kale ah ayaa ugu habboon macaamiisha sababta oo ah Jack Power Power Portra Power ee ay noo bixisay waxaa lasiiyaa si ay u qancaan baahiyaha kala duwan ee macaamiisha. Waxaan hubineynaa in qiimaha adeegyadayada ay ka yar yihiin.
Alxanka ugu fiican ee dhalada hydraulic dhalada Jack
U habeeyey soosaarayaasha qalabka kale ee kor u qaadida Shiinaha
Verralic-ka ugu fiican ee alxanka 50t alaab-qeybiye
@Dralic alxanka Jack 50TQaybta ugu fiican ee biyaha ah ee 'Epont'.
Xirfadlaha Khabiirka ee Soosaarayaasha
Shaygaani wuxuu hor istaagay tijaabada kooxdayaga QC ee xirfadda leh iyo dhinac saddexaad oo awood u leh. ayaa lagu takhasusay wax soo saarka sanado badan. Alaabta waa hypoalleergic sidaas darteedna jidhka ayuu u jiidaa, oo si weyn u yareynaya halista falcelinta xun.Xirfadlaha Qaab-dhismeedka Guryaha ee EPONT Gury, waxaan leenahay 4 xariiq wax soo saar iyo 2 khad wax soo saarka kuleylka ah, JackAck dhalada maalin maalmaha ka mid ah waxaan soo saari karnaa 5000pcs, oo ku saabsan sagxadda sagxadda ee dabaqa ah waxaan soo saari karnaa 500pcs.
Jack ee caadiga ah ee ku saabsan dhalada ku habboon
Dhalada caadiga ah ee qaboojiyaha. Ma jiro wax diidaya in sheygan uu saameyn wanaagsan ku leeyahay niyadda wuxuuna bixiyaa nasasho, gaar ahaan hurdada xanuunka iyo madax xanuunka madax xanuunka. Shaygu wuxuu leeyahay tayo sare oo dusha sare ah. Burburinta dusha sare ma noqon doonto si fudud ugu nugul in la xidho sida dildilaaca, patches, godad ama xitaa jabsan. Gogosha sariirta noocan ahi waxay qofka ka caawin kartaa inuu si fiican u seexdo habeenkii, kaas oo ka caawiya hagaajinta xusuusta iyo hagaajinta awooda xoogsaarista.Dhalada caadiga ah ee ku-meel-gaarka ah ee 'vertt'. Gawaarida, Fookflift iyo mashiinka dhismaha, waxaan horeyba iskagala shaqeynay ka badan 10 shirkadood oo ka mid ah 500 shirkadood ee adduunka oo kale ah oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu weyn ee Shiinaha.